Galmudug oo Guddi u saartay weerarkii lagu dilay Saraakiishii CXD | Allbalcad Online
Home WARARKA Galmudug oo Guddi u saartay weerarkii lagu dilay Saraakiishii CXD
Galmudug oo Guddi u saartay weerarkii lagu dilay Saraakiishii CXD
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Galmudug ayaa weli wada hawlgal lagu baadi-goobayo kooxihii dil wadareedka u geystay saraakiil ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ka tirsanaa, dilkaas oo ka dhacay meel u dhow degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud.
War-kasoo baxay Wasaaradda Amniga Dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay gacanta ku dhigeen mid kamid ah dadka lau tuhmayo in ay dilkaasi ka dambeeyeen, kaas oo ku hubeysan qoray AK47 ah.
Sidoo kale Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa sheegtay in Maamulka degmada Guriceel iyo Ciidamada amniga inay ku guulaysteen in ay helaan mid ka mid ah saaraakiishii la weeraray oo la waysanaa oo badqaba, iyada oo sidaas ay ku noqonayaan saraakiisha weerarkaas ka badbaaday 3 sarkaal.
Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa guddi baaritaan u saartay dhacdadii shalay galab ka dhacday meel u dhexeysa Guriceel iyo Balanballe kuwaasoo baaritaan qotodheer ku samaynaya falkii weerarka saraakiisha, sida lagu sheegay war kasoo baxay Wasaaradda.
Previous articleGanacsatada Jaadka Kenya oo Uhuru ku cadaadinaya in uu la xaajoodo DFS
Next articleMaxkamada Ciidamada oo maanta la soo taagay rag lagu eedeeyay inay dilal ka geysteen Muqdisho